सौरमा प्यानलहरू कति लामो हुन्छन् | best-solar-panels.com
25 वर्ष (वा लामो)। यो टायर एक निर्माताबाट व्यापार सामान्य आश्वासन हुन सक्छ। वास्तविकतामा, स्टार प्यानलहरू भन्दा धेरै लामो समयसम्म यो हुनेछ: आश्वासनले सामान्यतया प्यानलहरूलाई अनुमति दिन्छ जुन उनीहरूको मूल्याङ्कन क्षमताको आठौं भागमा कम्तीमा 50 बर्षसम्म काम गर्न सक्छ। NREL द्वारा एक अध्ययनले थाहा पाउँछ कि प्यानल को थोक अझै पनि निर्माण को ऊर्जा बनाउन को लागी 20 साल पछि, थोडा उत्पादन मा थोडा कम हुन्छ।
सौर शक्तिमा लगानी एक लामो प्रतिबद्धता हुन सक्छ। माथि-सामने मूल्य ठूलो हुन सक्छ, तथापि, लगानीले कर प्रोत्साहन र तपाईंको ऊर्जा बिल मा मासिक बचत मार्फत समयको समयमा आफैलाई भुक्तानी गर्दछ।
समयका साथमा उनीहरूको लगानीको मूल्यको गणना गर्न प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि, हामीले प्राथमिक प्राप्त प्रश्नहरूको बीचमा एक छ: "तारा ताराहरू कति लामो समयसम्म?"
प्यानलहरू प्राय: पच्चास वर्षसम्मको लागि वारंट गरिन्छ, त्यसैले तपाइँ तिनीहरूलाई लामो समयसम्म अन्तिममा आशा गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि, अध्ययनहरूले देखेका छन् प्यानलहरू अझै पनि कम क्षमतामा काम गर्न लामो हुँदा आश्वासन समाप्त हुन्छ।
बिट गणित गरौं: तारा प्यानलहरू एक शून्य पीडित गर्दछ। 5% प्रति वार्षिक 15 पन्ध्र क्षमता हानि। 25-वर्ष आश्वासनको टिपमा, तपाईंको प्यानलले अझै पनि उनीहरूको मूल्याङ्कन उत्पादनको 75-87.5% मा ऊर्जा निर्माण गर्नै पर्दछ।
नर्सिङ एनआरईएल अध्ययनमा एसोसिएट को अनुसार, स्टार आर्मेन्सीहरूको लगभग आठौं भन्दा लामो आश्वासन भन्दा लामो थियो।
मानक सौर ब्याट्री वारंटी
तारा प्यानलहरूको लागि सामान्य आश्वासन 20 बर्षको छ। यस युगमा, निर्माताहरूले पक्का गर्ने पक्का पावरमा वा बन्द गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। अधिकांश प्यानलहरूले आश्वासन को जीवन भर मा न्यूनतम आठौं को मूल्याङ्कन उत्पादन को आपूर्ति को लागि तैयार गरेको छ।
उदाहरणका लागि, एक सय सय वाट प्यानललाई 240 वाटहरूको न्यूनतम (80 यसको मूल्याङ्कन गरिएको 25%) निर्माण गर्न XNUMX-वर्ष आश्वासनको निर्माणमा।
केही फर्महरूले तीस वर्षको वारेन्टी प्रदान गर्छन् वा आठौं पावरको प्रतिज्ञा गर्छन्, तथापि यी आउटलर्स हुन्। गुणवत्ता आठौं शक्तिमा बीस वर्षको छ।
सौर प्यानलहरू पनि एक अलग शिल्प आश्वासन पनि छ, कुनै गलत उत्पादन बक्स जस्तै एक खराब जंक्शन बक्स वा फ्रेम लुकाउन। सामान्यतया शिल्प आश्वासन भनेको दस वर्ष हो, केहि निर्माताहरूले बीस वर्ष शिल्प आश्वासन दिन्छन्।
त्यसोभए ... कति लामो तारा तारा प्यानलहरू, साँच्चै?
त्यसोभए जब बीस बर्षको अंक हुन्छ? प्यानल जुन आठौं पावरमा उत्पादन अझै पनि काम गर्दछ, दाँया?
त्यहाँ कुनै चालहरू छैनन् - समाधान हो हाँ! यदि तपाइँका प्यानलहरू अझै आउटपुट ऊर्जामा छन् भने, तिनीहरू स्विच गर्न कुनै वास्तविक कारण छैन।
कहिलेकाहीँ उनीहरूको आश्वासनको म्याद समाप्त भएपछि लामो समयको प्यानलले ऊर्जा निर्माण गर्दछ। राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगशाला द्वारा 2012 अध्ययन संग लगातार, प्यानलहरुको लागि सामान्य गिरावट दर शून्य .5% सालाना 0.8% वर्ष को बीच हो।
गिरावटको दर के हो?
गिरावट दर त्यो स्टार्टर प्यानलको दर समयको साथ क्षमतामा गुमाउँछ। एक सय पचास पाँच वर्षको गिरावटको साथ एक प्यानल दस वर्षको हुँदा दसौं कम आर्थिक हो।
वास्तवमा, परीक्षणको सातौं आठ प्रणालीहरू एक गिरावट दर थियो तर प्रति वर्ष एक सय चालीस पाँच। यसको मतलब छ कि जब 20 बर्षको प्रयोगको लागी, पाँच तारा प्यानलबाट बाहिरको चार घण्टामा अझै पनि पाँचौं पावर वा उच्चमा काम गर्दछ।
यस समयमा, यो अनुमान गर्न ईमानदार छ कि तपाईंको तारा प्यानल अझै पनि केहि क्षमतामा ऊर्जा निर्माण गर्न सक्छ, जब आश्वासन लामो हुन्छ। उत्कृष्ट उदाहरणको लागि, यो 30-हालको प्यानललाई निस्क्रिय बिल्डिंग सल्लाहकारमा प्रस्तुत गरिएको प्रयास गर्नुहोस्। एक पल्ट मालिकले आफ्नो छत बन्द र परीक्षणको माध्यमबाट भाग्यो, यो अझै पनि कारखाना निर्दिष्टीकरण भन्दा बढी प्रदर्शन।
यहाँ तपाईंको ROI को लागि के अर्थ छ
यो उत्कृष्ट समाचार हो यदि तपाईंको मुख्य चिन्ताको सकारात्मक हो जुन तपाइँको प्रणालीमा लगानीमा (ROI) सकारात्मक आउँछ।
अधिक अनलाईन क्यालेन्डरकर्ताहरूले अनुमानित तारा बचत आधार गणनाको आधारमा 25-वर्ष आश्वासन रकममा। तपाइँका प्यानलहरूबाट प्राप्त थप थप जानकारी अतिरिक्त बोनस छ।
तारा एक समझदार लगानी हो? तपाईंको भुक्तानी रकम अनुमान गर्न हाम्रो तारा आरओआई कैलक्यूलेटर प्रयोग गर्नुहोस् - तर लामो समयसम्म यसले तपाईंको प्रणालीको सीधी मूल्य प्राप्त गर्न कर प्रोत्साहन र ऊर्जा बिल बचत गर्दछ।
हामी प्यानलहरूले उनीहरूको वारंटीलाई गुप्तिकरण गर्न सक्दैनन् (हामी सबैको पछि ग्यारेन्टीको उद्देश्य हो)। तथापि, अधिकांश प्यानलहरू कम समयमै निर्माण हुँदा लामो समयसम्म उनीहरूको समयको अवधि हुनुपर्छ। यो तारा प्यानलहरूको नतिजाको रूपमा हुन सक्छ कुनै पनि घडी घटक छैन, र यसरी असाधारण विश्वसनीय हुने गर्छन।
यदि तपाईंको प्रणाली बन्द गरिएको छ र तपाईंको प्यानलहरू निर्माण रहन्छन् भने, तपाईंको ROI ले तपाइँलाई कुनै पनि लाइनको क्यालेन्डरहरू (हाम्रा सहित) द्वारा प्रदान गरिएको अनुमानमा अनुमान गर्न सक्छ।
तपाइँका प्यानलहरू आफ्नो वारंटीको बिरोधको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी संभावनालाई त्याग्न चाहानुहुन्छ? एक बिट प्रयास ले तपाईको प्रणाली लाई तैरने देखि चलने को लागि एक विस्तारित धन्यवाद मा जान्छ।
तपाईँको प्रणालीको जीवनकाल कसरी विस्तार गर्ने
मनमा राख्नुहोस् तारा प्यानलहरू शायद तपाइँको प्रणालीको एक भाग अवशिष्ट हुन मिल्छ। तपाईंले अझै पनि चलिरहेको सबै सामान रहन इन्वर्टरहरू र ब्याटरहरू कायम राख्नुपर्छ वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ।
इन्भेरर्सहरूसँग तपाईंको प्यानलहरू भन्दा छोटो समय अवधि छ, र तपाईले प्राप्त गर्नुभएको प्रणालीको कुन प्रकारको स्वरूपलाई बदल्न सकिँदैन। यदि तपाई अफ-ग्रिड हुनुहुन्छ (वा ब्याट्री-ब्याड ब्याट्रीसँग जोडिएको), ब्याट्रि रखरखाव र प्रतिस्थापनले तपाईंको लागि थप मूल्य थप गर्न सक्दछ।
तपाईंको लगानीको रक्षा गर्न उत्तम धन्यवाद स्थापना प्रणालीमा पूर्णतया प्रणालीको जाँच गर्न को लागी। निश्चित प्यानलहरू सिर्जना गर्न तपाईंको दुखाइको जाँच गर्नुहोस् र तारिख सुरक्षित छन्। तपाईंको प्यानल को जीवनकाल को सबै भन्दा ठूलो खतरा भौतिक हान हो या इलेक्ट्रनिक विफलता subpar स्थापना को लागि धन्यवाद।
दस वर्ष पछि इन्भेरर्स बदल्नुहोस्
अधिक ग्रिड-टाई इन्भर्टरहरूसँग 10-वर्ष आश्वासन छ, र धेरै निर्माताहरूले छनोट गर्न बीस भन्दा बढी 25-वर्ष आश्वासन कवरेज गर्न अप्ठ्यारो पार्छन्।
इनभेरर्सहरूको लागि वारंटी एक्सटेन्सन एक समझदार लगानी हो। यो मान्न सुरक्षित छ तपाइँ आफ्नो प्यानलहरू माथि आश्वासन अघि एक पटक कम्तिमा एक पटक आफ्नो विद्युत कनवर्टर बदल्नुहुनेछ। यदि तपाईंको विद्युत कनवर्टरले सडकमा पन्ध्र वर्ष पस्न असफल भएमा, यो शायद भर्खरै र उच्च मोडेलको साथ प्रतिस्थापित हुनेछ।
आफ्नो विस्तारित आश्वासन छनौट र नीतिहरूको बारेमा विद्युत कनवर्टर निर्मातासँग जाँच गर्नुहोस्। विस्तारित वारंटीहरू सिधै निर्माताबाट खरिद गरिएका छन्।
अफ-ग्रिड इन्भेरर्सहरूसँग सानो वारंटहरू छन्। तिनीहरू 1-5 वर्षबाट भिन्न हुन्छन्, केहि मोडेलहरूको लागि त्यहाँ दश वर्षसम्म विस्तार भएको।
जब तपाइँ नर्सिङमा एसोसिएट्स खरीद गर्नुभयो भने विस्तारित आश्वासन, छिमेकीको विवरण हेर्नुहोस्। केही गायक घटकको मूल्य, तथापि श्रमको मूल्य होइन।
यो तपाईं बिशेष नहुन सक्छ यदि तपाईं बिजुली कनवर्टर आफैलाई स्वाइप गर्न चाहानुहुन्छ भने। यद्यपि तपाईं जेब को पोर्टल हुनेछ यदि तपाईं ठेकेदारलाई सडकमा विद्युत कनवर्टर स्विच गर्न चाहानुहुन्छ भने।
ब्याटरीहरू राख्नुहोस् र बदल्नुहोस्
ब्याट्रि रखरखाव र प्रतिस्थापन एक अफ-ग्रिड प्रणालीसँग सम्बन्धित सबै खर्चहरूमध्ये एक हो। कम-अपशिष्ट ब्याट्री किस्महरू पनि, जस्तै परमाणु संख्या3र सील लिड एसिड ब्याटरहरू, अझै पनि वार्षिक समयमा केही पटक निरीक्षण गरिनु पर्छ।
अधिकांश ब्याट्रीहरूमा 3-10 वर्षको ग्यारेन्टी समावेश छ, पूर्णमा गणना। तथापि यदि तपाईं आफ्नो ब्याट्रीहरू ठीकसँग ख्याल राख्नुहुन्न भने, तिनीहरू कब्जाको प्राथमिक वर्ष अन्तरालहरूमा असफल हुनेछन्।
उदाहरणका लागि, प्रयोगमा ल्याउँदा नेतृत्व एसिड ब्याटरहरू पुरा तरिकाले पुन: चार्ज गरिनुपर्छ, र तिनीहरू राम्रो तोडिएका छन् भने विस्तारित समयका लागि बस्न नहुने बेलामा।
उच्च उच्च गुणस्तरको ग्रिड गहिरो चक्र ब्याट्रीहरू 5-15 वर्षहरू बीचमा अन्तिम हुन सक्दछ, ब्याट्रीको प्रकारमा गणना र उनीहरूको प्रयोग र बनाए राख्ने तरिका। तपाईं आफ्नो ब्याट्रीको ब्याट्री विस्तार गर्नका लागि उनीहरूलाई राम्ररी हेरचाह गरी निश्चित गरी निश्चित गरी तिनीहरू ठीकसँग राख्नेछन्।
तपाईंले राम्रो गर्न सक्नुहुने सबैभन्दा राम्रो समस्या हो जुन तपाइँको प्रणाली राम्ररी सुरुवात देखि शैली हो। सही मात्राको ब्याट्री क्षमता, वैकल्पिक ऊर्जा, र बिजुली कनवर्टर उत्पादनको लागि खाता ठीकसँग सञ्चालन गर्ने सबै कुरा रहनको लागि आउटपुट।
पावर हानिको लागि खाता
यहाँ सबैभन्दा धेरै लिफ्ट छ: यो अत्यन्तै सम्भव छैन कि आश्वासन अप गर्नु भन्दा पहिले तपाईंले आफ्नो तारा प्यानलहरू बदल्न सक्नुहुनेछ। तारा प्यानलहरू पछिल्लो विस्तारित समय - प्रणालीको विपरीत घटक भन्दा बढी।
PREV: मेरो घरको लागि कति सौर प्यानल चाहिन्छ?